Hogaamiyeyaasha xisbiga WIPER oo xoojiyay ololahooda ku aadan mowqifka Kalonzo Musyoka – The Voice of Northeastern Kenya
Hogaamiyeyaasha xisbiga WIPER oo xoojiyay ololahooda ku aadan mowqifka Kalonzo Musyoka
Star FM October 24, 2016
Qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha siyaasadeed ee kasoo jeeda xisbiga mucaaradka ah ee WIPER ayaa taageero ballaaran u raadinaya mowqifka uu hogaamiyahooda Kalonzo Musyoka ka taaganyahay doorashada xilka madaxweynaha ee sanadka soo socda.
Mr Musyoka ayaa ku adkeysanaya in uu u soo istaago tartanka xilka madaxweynaha, isagoo damacsan in uu calanka u qaado isbahaysiga uu ka tirsanyahay ee CORD, in kastoo ay jiraan hogaamiyeyaal kale oo jagadaas raadinaya.
Siyaasiyiin ay ka mid tahay haweeneyda ka tirsan qalaka Senete-ka ee lagu magacaabo Judith Sijeny, iyo xildhibaan Robert Mbui, ayaa shalay ugu baaqay shacabka ku dhaqan maamul goboleedka Kisii in ay garab istaagaan Mr Musyoka.
Hogaamiyeyaashaan iyo siyaasiyiin kale oo ka tirsan xisbiga WIPER ayaa ka hadlayay isu soo bax uu ka qeyb galay Kalonzo Musyoka qudhiisa.
← Julius Yego oo isbitaal la dhigay kadib markii uu shil galay
Hogaamiyeyaasha xisbiga WIPER oo xoojiyay ololahooda ku aadan mowqifka Kalonzo Musyoka →